भाग्य र शिल्पाको कुस्ती !:: Mero Desh
भाग्य र शिल्पाको कुस्ती !
Published on: १५ पुष २०७६, मंगलवार १०:४९
हुन त पुरुषको भाग्य र स्त्रीको चरित्र कसैले अनुमान गर्न सक्तैन भन्ने हाम्रो समाजमा उक्ति चल्तीमा छ तर हाम्री अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलको जिन्दगीमा चाहिँ भाग्य नै सबैभन्दा ठूलो पहेली बन्न पुगेको छ। कहिले प्रहरी–प्रशासनको तनाव, कहिले पूर्वपतिको, कहिले सिनेमा नचल्नुको दुःख त
कहिले के ! २०७३ साल असार २९ गते फिल्म निर्माता छवि ओझासँग गुपचुप विवाह गरेकी शिल्पाले गुपचुपमै सम्बन्ध मिलाउन सकिनन्। त्यसैले त यतिबेला उनलाई जे जति तनाव आइपरेको छ, त्यसको दोष उनले आफ्नो भाग्यमाथि थोपर्न भने छाडेकी छैनन्। त्यसैले त गएको मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा एक हल्का मुस्कान सहितको तस्बिर पोस्ट गर्दै त्यसमा गज्जबको क्याप्सन फुराइन्। क्याप्सन छ, ‘गजबको प्रतिस्पर्धा चल्दैछ भाग्य र मबीच। ऊ जित्न दिँदैन, म हार्न जान्दिनँ ! तपाईंलाई ‘वाह, क्या क्याप्सन !’ भन्ने लाग्यो भने बुझ्नुस्, जब जिन्दगीले झापड हान्छ नि यस्ता क्याप्सन कति फुर्छन्, फुर्छन्। पत्याउनु हुन्न भने शिल्पाको अर्को क्याप्सन कुर्नुस्।
फिल्म नबन्दै हल्लीखल्ली
‘प्रेमगीत ३’ निर्माण पूरा नहुँदै चर्चामा रहने फिल्ममध्येमा गनिन्छ। त्यसमाथि त्यसको हिरो प्रदीप खड्का छन् भने त झन् कुरै नगरौँ।
त्यसो त प्रदीप आफैँ मात्र पनि हल्लीखल्लीमा हुँदैनन्, उनको साथमा निर्माता सन्तोष सेन पनि सँगै मच्चिरहेका हुन्छन्।
अब हेर्नुस्, शुरुमा अभिनेत्री छान्ने होड चलाए, जबकि त्यसभन्दा अघि नै फिल्ममा अभिनेत्रीलाई लिइसकेको चर्चा चलिसकेको थियो। तापनि हल्ला गर्न काम लाग्छ भनेर अडिसन लिइछाडे। दोस्रो हल्ला प्रदीपको जिमखानाको थियो। यत्तिको ज्यान त यसअघि कुनै हिरोको थिएन है भन्ने देखाउन छाडेनन्। ज्यानपछि पोस्टरका कुरा आइहाले। त्यसपछि पनि फिल्ममा प्रयोग गरिएको डेकोरेसन त कुनै फिल्मले पनि गर्न नसकेको चर्चा चुल्याए।
कहिले निर्माता, निर्देशक र अभिनेताको उस्तैउस्तै कपालको कुरा पनि उठाइयो। प्रदीपकको सिक्स प्याक बनाउने सल्लाह र सन्तोषको फिल्म चलाउन गरिएका यत्तिका हल्लाले कत्तिको काम गर्ने हो, त्यसका लागि फिल्म रिलिज कुर्नैपर्छ।